Ama-Strawberries ebusika: i-pastille ne-jelly
Ama-billets avela ama-strawberries ebusika angakujabulisa ngesikhathi sezinyanga ezibandayo, uma uzikhathalela ngesikhathi sokuzenza. Ngaphandle kwe-banal, nakuba i-jam enomsoco kakhulu, le berry elimnandi lingenza i-pastille, i-jelly, futhi iwufake neshukela noma nje.
Amakhokheni aphuma kuma-strawberries ebusika - i-pastila
Ifomu engavamile yalokhu ubumnandi obukhazimulayo kufana namaswidi okuhlakulela ekukhiqizeni izimboni. Futhi ukunambitha kubonakala sengathi bobabili i-marmalade ne-lollipops, nakuba kungcono kakhulu. Futhi (ngokuqhathaniswa ne-jam) endaweni eningi izinto eziningi eziwusizo zilondolozwa. Ngakho-ke, ake senze lezi zingxenyana zokuqala ezivela kwi-strawberries ebusika.
Amakhilogremu amathathu amajikijolo amakhulu ahlanzekile kudingeka ahlanzwe, ahlutshiwe, ashaywe nge-blender. Engeza isipuni sikasawoti kanye namapuni wezipuni amathathu kuya ku-5 uju. Gcoba, sebenzisa i-ladle ukuze uthele ngamapellets, ehlanganiswe ngesikhumba, futhi usakaze ngokulinganayo. Dry emazingeni angamashumi amathathu nesishiyagalolunye ama-Celsius cishe amahora angamashumi amabili nane. Ngezikhathi ezithile udinga ukuvula imikhiqizo. Ukulungele ukufaka isikhumba esinamandla, esomile futhi esincane kakhulu. Uhlukanise namashidi, gxumela kuma-tubes amade bese ucindezela phansi ngesandla ukuze ube yi-flat. Ungakha ama-sweets amancane ufake imbiza ehlanzekile. Ukuze ugcine unamathisele okwenziwe ngokucophelela kufakwe ephepheni egumbini lapho inundu yokudla nezinye izinambuzane zingatholakali. Awukwazi ukukusika zibe izingxenye ezincane, kodwa ugoqa nge-roll, ubeke ebhokisini lephepha noma ibhokisi lezinkuni, okudingeka uqale ukumboza ngephepha lokufaka. Uma ugcina i-pastille esitsheni noma ephakheji, kufanele ukuthi ivalwe ngokuqinile. Ingakwazi ukuthola impepho engaphandle, okumelwe icatshangelwe lapho igcina. Futhi, i-pastille kumele ivikelwe elangeni.
Ama-Strawberries ngenxa yebusika - i-jelly
Okokuqala udinga i-gelatin noma i-agar-agar. I-Jelly kusuka ku-strawberries ebusika kufanele ibe nokuvumelana okunamandla kakhulu. Ungayenza kusuka ku-fresh, kanye nakuma-berries amaqhwa. Badinga i-kilogram eyodwa, i-gelatin - amasentimitha angu-20, noshukela - ingilazi egcwele (250 milligrams).
Lungisa ama-strawberries, uwageze futhi uwahlanza ngokucophelela kusukela eziqubeni. Yenza i-blender ku-blender bese uyihlunga. Thela inqwaba elandelwayo epanini, faka ushukela bese wengeza i-agent agent. Ngomlilo ophakathi kwenza kube ngamathumba ngaphandle kokukhohlwa ukuphazamisa, kungenjalo i-jelly ngeke ibe yinto ehambelanayo. Thatha ngezikhathi ezithile i-Foam. Ngemuva kokubilisa ukucima umlilo, kodwa qhubeka uvuselela. I-jelly elishisayo emitini enenzalo, bese ubilisa emanzini okugeza. Kungaba lula njengokuthi ama-strawberries aqhwalayo ebusika. Uma unquma ukwenza izikhala usebenzisa i-efriji, udinga ukukhumbula ukuthi ngaphandle kokwengeza inani elincane likashukela, amajikijolo azolahlekelwa ukuma ngemva kokudonsa. Ukuze ugweme lokhu, ama-strawberries afafazwa ushukela noma i-powder. Futhi uma enika i-juice encane, gcwalisa esitsheni esikhethekile.
I-sauce enamafutha amnandi: iresiphi
I-chocolate glaze: zokupheka
Indlela yokupheka inhlama ngaphandle kwemvubelo
"Ukuxilonga Plus", Voronezh. Ukubuyekeza, Amanani
Indlela ukhohlwe lover? isiqondiso esiwusizo kanye nezeluleko njengesazi sokusebenza kwengqondo
Andrey Makarov, umlingisi: Biography kanye nempilo yakho
Inhliziyo inyama yenkonyana: iresiphi nalelo ukunambitheka
Umqondo Economic Wezezimali
"Cromwell": British Army ithangi phakathi neMpi Yezwe II
Pitsunda - izinto zokubuka. Pitsunda